Inkqubo yoLwazi lweJografi isebenzisa iManfold GIS-Geofumadas
Ikhaya/Ukufundisa i-CAD / GIS/Inkqubo yoLwazi lweJografi isebenzisa iManfold GIS
Ukufundisa i-CAD / GISGIS asibonise
Le yenye yezo mveliso ukuba kuyonwabisa ukukhuthaza, kwaye nomoya ababewakhelwe wona ngoku uyenziwa ufumaneke eluntwini. Incwadana yemigaqo echaza indlela yokuphumeza iNkqubo yoLwazi lweJografi kamasipala usebenzisa i-Manifold GIS.
Iinguqulelo ezihleliweyo zezi mveliso zakhiwe ngokwenkqubo-sikhokelo yeNkqubo ukomeleza oomasipala, nelifa labo ngokokumiselwa kwenkqubo sinethemba lokusasaza ngethemba lokuba lingaluncedo nakwamanye amazwe. Njengokuba sisenza ezi nzame esidlangalaleni, ulwazi ludemokhrasi kwaye luphuculwe ngentsebenziswano noluntu olufundayo ngoku olubonisa iindawo zokwabelana kwi-Intanethi.
Isakhiwo soxwebhu siquka:
Apha sichaza indlela olwakhiwe ngayo uluhlu lwamacandelo kunye nezinto ezenziweyo kwi-GIS ephindaphindwayo, kunye nokubalula kweprojekthi yesixhobo sikamasipala njengomzekelo. Umxholo wokunikezelwa kwengqikelelo kwidatha ukwaziswa kwaye umxholo wahlulwe waba ngamacandelo:
Ulwakhiwo lwe-SIG kwiMpawu
Eli candelo libonisa ezona zinto zibalulekileyo kulwakhiwo lwedatha kunye nokuhlela, ukusuka ekungeniseni idatha yevektha ukuya kulwakhiwo lwamagama edatha. Kushiya kuphela ngoku ngoku ukuba ndiyakuqonda, ukuyilwa koqwalaselo lwazo lweetemplate zohlobo.
Ukwakhiwa nokuhlela izinto ekudwebeni
Ukuphatha amatafula kunye neyeyi
Apha, ingcamango yesiseko ye-Manifold operation iboniswa kuhlalutyo lweenkcukacha kunye nokudala iziphumo ezintsha kwi mibuzo:
Kweli nqanaba lokugqibela kubonisiwe okunokwenziwa ngeZinto ezininzi xa kusenziwa ubume bemveliso. Nangona eli candelo lifutshane, lishiya ukwenziwa kweenkonzo zokupapasha i-OGC, kucingelwa ukuba ukuza kuthi ga ngoku yinto ephambili yomsebenzisi osisiseko we-GIS kwaye kuthathelwa ingqalelo ukuba ukusukela ngoko sele iyinxalenye yesihloko se-IDE. Iindawo zesahluko sokugqibela zezi:
Londoloza i-components components
Yakha i zakhiwo
Ekugqibeleni, njengesihlomelo, incwadi yophawu yongezwa eshwankathela iimpawu zeendlela ezisetyenziswe kumzekelo. Ngelixa
Ibuyiselwe eluntwini, ukuze isetyenziswe njengomzekelo weemveliso zenkqubo yokwenza izinto eziyimfuneko kwimeko yethu, hayi ukwakhiwa kwazo kuphela kodwa nokubonakala kwazo nokudityaniswa kweenkqubo zolawulo lolwazi. Inamakhredithi aboniswe ngendlela eyahlukeneyo, ukuze nabani na ofuna ukuyisebenzisa akwazi ukukhankanya umthombo oboniswe apho. Isiciko sangasemva sikwabonisa imeko ekuyo le ncwadi, nanjengoko iyinxalenye yamaxwebhu ali-18 enza uthotho-ntathu: ubuGcisa, uLawulo kunye neTekhnoloji, emisela isitayile kunye nobungakanani obenza olu xwebhu lube nakho amaphepha amaninzi agcinwe kwifomathi yama-54 kuphela.
Njengomzekelo ndikubonisa iprojekthi eMzantsi Melika, endithe ndabelana naye ngoxwebhu kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo noluthatha ithuba lokuba luncedo kwesi sixhobo sencwadana ukwenza uhlengahlengiso kwiimfuno zalo. Soloko usebenzisa ii-GIS ezininzi.
Apha unako ukukhuphela i-PDF inguqulo yewebhu
I-ESRI isungula ushicilelo oluthile ukwenza i-GIS ifikeleleke ngakumbi kubafundi baseyunivesithi
I-sudos editor kwakhona kubulela umqulu kunye nomzekelo ukukubona kungekudala.